Madaxweynaha Somaliya oo saacadaha soosocda laga sugayo magacabista raiisul wasaaraha – SBC
Madaxweynaha Somaliya oo saacadaha soosocda laga sugayo magacabista raiisul wasaaraha
Posted by Webmaster on Aktoober 6, 2012 Comments
Qaban qaabada iyo Dhaq dhaqaaqyada soo magacaabista raiisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa siweyn loogaga dareemayaa gudaha xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Sida wararka ay ku soo baxyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheeq Maxamuud ayaa lagu wadaa in saacadaha ugu dhow ee nagu soo fooda leh in uu ku dhawaaqo raiisul wasaaraha cusub ee Xukuumada Federaalka ee soo socota.
Inkastoo hadalheyn farabadan ay soo baxayaan kuwaasi oo ku aadan cida madaxweynuhu u magacaabayo Raiisul wasaraha iyo saxiixa warqada lagu magacaabi lahaa raiisul wasaaraha ayaa hadana aan jirin warar xaqiiqo ah oo arimahaasi faah faahinaya.
Waxaa un la ogyahay dhaq dhaqaaqyada ku aadan magacaabistiisa raiisul wasaaraha cusub ee soconaya iyo in saacadaha soo socda la filayo in lagu dhawaaqo raiisul wasaaraha cusub.
Wararkale ayaa sheegaya in Saxaafada la isugu yeeray saaka Aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya si uu madaxweynaha u siiyo wareegtada lagu shaacinayo magacaabista raiisul wasaaraha cusub balse markii dambe dib loo celiyay oo loo dhigay waqti kale oo la filayo in ay galabta tahay.
Musharixiin dhowr ah oo xilkaasi damacsan ayaa iyaguna dhankooda lagu arki karaa xarunta madaxtooyada waxaana saxaafada qaar ay qorayaan musharaxiin xilka raiisul wasaarenimo oo u dhow in loomagacaabay xilkaas lakin go’aanka waxaa laga sugayaa Madaxweynaha Soomaaliya.